UJack Nicklaus: I-Bio yomsebenzi kwiGosa leGalofu
Iinkcukacha zomsebenzi kunye namanani kwi-golfer ephambili
UJack Nicklaus wayengumdlali obalaseleyo kwigalufu ukususela ekuqaleni kwawo-1960 ukuya ngasekupheleni kweminyaka yee-1970, kunye nemibhobho embalwa yobukhulu kuma-1980. Ungomnye wabadlali begalufu ebalaseleyo kwimbali yezemidlalo; Enyanisweni, abaninzi banomyinge uNombolo 1 ixesha lonke.
Umhla wokuzalwa: ngoJanuwari 21, 1940
Indawo yokuzalwa: uColumbus, eOhio
Isiteketiso: I-Golden Bear ... kodwa ekuqaleni kwesikhundla sakhe, ngaphambi kokuba amise iinkcukacha zakhe aze athole inhlonipho kunye nokunyaniseka kwabalandeli, wayebizwa ngokuba yi "Fat Jack."
Ukutshatyalaliswa koKhenketho :
• Uhambo lwe-PGA: 73
• I- Tour Tour : 10
Uluhlu lwempumelelo kaJack Nicklaus
Maqela oMkhulu :
• Abaphathi: 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986
• US Open: 1962, 1967, 1972, 1980
• I- British Open : 1966, 1970, 1978
• I- PGA Championship : 1963, 1971, 1973, 1975, 1980
• U-Amateur wase-US: 1959, 1961
• Ilungu, IHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama
• Umlawuli we-PGA we-Tour, 1964, 1965, 1967, 1971, 1972, 1972, 1975, 1975, 1976
• Umdlali wePGA wonyaka , 1967, 1972, 1973, 1975, 1976
• Ummkeli, 2 "iGolfer ye-Century"
• Ebizwa ngokuba ngu-"Athlete of Decade" wee-1970 nge- Sports Illustrated
Ilungu, iqela le-US Ryder Cup, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1981
• I-Captain, iqela le-US Ryder Cup, ngo-1983 no-1987
• I-Captain, iqela le- Cup Presidents Cup , i-1998, 2003, 2005, 2007
• UJack Nicklaus: "Angizange ndihambe kumqhubi okanye ukujikeleza kwegalufu ndimele ndibethe umdlali othile.
Ukuba ndizilungiselele ngokubalulekileyo, ndangena phambili, ndize ndibethe igumbi legalufa, abanye bazinyamekela. "
• I- Gene Sarazen kwi-Nicklaus: "Andizange ndicinge ukuba ubani oza kubeka uHogan emthunzini, kodwa wenza."
Uninzi olungaphezulu lweJack Nicklaus Quotes
• UJack Nicklaus wadlala ii-154 ezilandeleleneyo ezifanelekile, ukususela ngo- 1957 US Open kwi- US Open Open ka- 1998 .
• I-Nicklaus yagqitywa kwi-Top 10 kwimali yoluhlu lweminyaka elilandelelanayo (1962-78).
• Wanqoba ubuncinane umcimbi omnye we- PGA Tour kwiminyaka eyi-17 elandelanayo (1962-78).
Jack Nicklaus Biography:
UJack Nicklaus wanqoba iikhomputha ze- PGA ze- 73 kwi-career yakhe. Abadlali ababini begalufu bawine ngaphezulu. Kodwa kwiindawo eziphakamileyo, ngaba abanye abagaluli baxhamla njani uNicklaus? Akunjalo.
I-Nicklaus yanqoba i-majors eyi-18 yobugcisa - iphindwe kabini kunabo bonke ngaphandle kweminye i-golfers. Wagqiba kweyesihlandlo sesibini kwixesha lesi-19, kunye nesithathu kwisithoba. Kukho konke, uNicklaus uthumele ama-48 aphezulu ama-3 aphelile, ama-56 ama- Top 5 aphelile kwaye i-Top Top engu-73 iphela ekugqibeleni.
Mhlawumbi iTiger Woods iya kunqumla iinqununu ezinkulu zikaNicklaus. Kodwa ngoku, uNicklaus uhlala ngumdlali ophumeleleyo kumbali yegolisa enkulu yegalufa. Yaye wenza konke ukubonisa iklasi elikhulu kunye nezemidlalo.
U-Nicklaus wadubulisa i-51 kwindawo yakhe yokuqala yegalufu eneminyaka eyi-10 ubudala. Xa wayeneminyaka eli-12 ubudala, wayephumelele kwi-6 ye-Ohio State Junior. Ulahlekelwe ukusikwa kwi- US yakhe yokuqala evula ngo-1957 eneminyaka eyi-17.
UNicklaus wanqoba i-1959 no-1961 izibongo zase-United States ngenkathi edlala ngokuthe ngqo kwi-Ohio State. Wagqiba okwesibini ku- Arnold Palmer ngo- 1960 US Open .
Waguquka ngo-1962, wafumana i-33.33 i-$ yokuqala kwiprogram, i-Los Angeles Open.
Kodwa izinto ngokukhawuleza zaziphucula, kwaye wawunqoba umphambili wakhe wokuqala kuloo nyaka, ekunqobeni i-Palmer kwisigxina esingama-18 kwi- Open US 1962 .
Ngeminyaka eyi-26 ubudala, uNicklaus wayegqibile i- grand slam yomsebenzi . Emva koko wawubamba bonke abazukileyo okwesibini. Kwaye, ekugqibeleni, ngo-1978 u-British Open Open, wayebazuzile bonke ubuncinane kathathu ngamnye. Isikhulu sokugqibela sikaNicklaus safika ngo-1986, eneminyaka engama-46, kunye noMasters wakhe wesithandathu.
U-Nicklaus wadlala ngokukhawuleza kwi-Tour Tour, kodwa wawuthatha amaxesha angama-10, kubandakanywa nezikhulu eziphezulu ezisibhozo. Wasekela kwaye wongamela i- Memorial Tournament ehloniphekileyo kwi-PGA Tour.
U-Nicklaus waletha amandla ekuphambili kwegalufu, kuba ngumqhubi ode kunabo bonke kwisizukulwana sakhe. Kodwa naye wayengomnye we-clutch putters obalaseleyo, kwaye izakhono zakhe zokugxininisa zaziyimpumelelo.
Endleleni, uNicklaus wadala ipropati yakhe yenkampani kwaye uye wakha iikhosi zegalufa, phakathi kwezinto ezininzi ezingekho kwimfundo.
I- Club yakhe ye- Muirfield Village yeGolf igqalwa phakathi kweyona nto ibalulekileyo kwi-United States, i-Nicklaus ibamba i-PGA Tour's Memorial Tournament apho ngonyaka.
UJack Nicklaus wanyulwa kwiHolo yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1974.
Jonga i-Index yethu kaJack Nicklaus ngolwazi olungakumbi kunye neenkcukacha malunga neBre.
Indlela Yokuyeka Ukukhangela Umqhubi Wakho
Ukufikelela kwiindawo eziManyeneyo kwi-Pitch Shots nge-7-8-9 Drill
Yeyona ndlela 'Iphulo Elikhulu' Liye lahlelwa Ngemizekelo Efunyenwe kwiMboniso
Iimigangatho ezi-3 zokuba iBhola lakho leGalufa lixhomekeke kwisihlahla
Umdlalo omfutshane-Umdlalo: Ibhola le-11
Iifayile zeMishit Tip: Ukulungiswa kweeNdawo eziPhezulu kwiGalofu
Utsalane lweengxaki kwiGalofu kunye nomdlalo wokuBheja owenza ukuba usebenzise
Ukuqaphela Ubungqina Bakho Bantwana kwiGalofu
Quotes Love Love
I-Tale yamaTsunamis kaMartian
Uphi uMgqibelo oyiNgcwele?
I-10 yeyona nto iLuhlu lweMigangatho yeeTek Team
UMichael Corinthos / kwikota yekota | Isibhedlele Isibhedlele
Nguwuphi uMphathiswa weKhabhinethi waseKhanada
Zizo ezinye zezinto ezigqithisileyo zeMoto kwiiMbali
Yintoni ephakathi kweDola yeSant?
Indlela yokukhetha phakathi kweeProgram zeBanga ezimbini
I-Rock Out kunye ne-Top 5 AmaGitta ombane abaqalayo
Kutheni iReggae Musician Bob Bobley i-Smoke Marijuana?
Indlela yokuchaza ngokuzenzekelayo